नेपालको संविधान २०७२ का विशेषताहरु
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको हो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले ”नेपालको संविधान २०७२” मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको […]
नेपालको संवैधानिक इतिहास
दुई पटकको निर्वाचनपछि संविधान सभाले अन्ततः ‘नेपालको संविधान २०७२’ निर्माण गरेको छ । संविधान देशको मुल कानून, अन्य कुनै पनि ऐन नियम कानून संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने दस्तावेज हो । देशले नयाँ संविधान पाएसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान निर्माण भएका छन् । नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको संवैधानिक इतिहास: […]
तीज भनेको एउटा हिन्दु नारीहरुको बिशेष चाड हो । यो सामान्य व्यक्तिदेखि लिएर देशका प्रमुख व्यक्तिहरुले पनि मनाउने गरिन्छ । देश विदेशमा छरिएर रहेका नेपाली नारीहरुले मनाउँदै आएको एक महत्त्वपूर्ण चाड तीज हो । यो परम्परागत रुपमा चल्दै र मनाउँदै आएको चाड हो । आफ्नो धर्म, सस्कारलाई कामय राख्नको लागि र संसारभरि पहिचान गराउनुको लागि […]
निर्मला हत्याकाण्ड : एक वर्ष बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल
हामी नेपाली कुन युगमा छौं सरकार ? देशलाई बिगार्ने र सपार्ने सम्पूर्ण अभिभारा सरकारकै हो । सरकारले सहि बाटो देखाए त्यहि बाटोमा हिड्ने हामी नेपालीहरु हौ । सरकारले नै बनाएका ती ऐन, कानुन र नियमलाई परिपालना गरेर हिड्ने हामी सोझा नेपाली । देशलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने सबै उत्तरदायित्व सरकारको नै हातमा छ । सत्तामा […]
पढ्नुहोस्, पैसा जोगाउने यी तरिकाहरु
पहिलाको तुलनामा तपाईको रोजगारी वा व्यवसायमा तपाईले प्राप्त गर्ने रकम वढेपनि रकम नजोगिएर हैरान भएको होला र कसरी पैसा जोगाउने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने यो टिप्स तपाईलाई काम लाग्न सक्छ । पैसा जोगाउने तरिका उपहार योजनाबाट नलोभिनुस् । आफूलाई चाहिएको कुरा मात्र किन्नुस् । र आवश्यक परेको बेला मात्र किन्नुस् । एक सय रुपैयाँको […]
समावेशितालाई देखाउने दाँत मात्र नबनाइयोस् !
निशा तामाङ, आज समावेशिताको बारेमा केही लेख्न मन लाग्यो, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालको मुख्य कानुनी दस्तावेज नेपालको संविधान हो । संविधान विपरीत वा संविधानसंग बाझिएका विषयहरू बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छन्, तर बदर गर्ने अधिकार कानुनको व्याख्याकार सर्वोच्च अदालतले मात्र पाएको हुन्छ । समावेशिताको प्रसङ्गमा अहिलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक […]
हामीले बच्चालाई राम्रो बनाउन सिकाउनुपर्ने बानीहरु
काँचो माटोलाई परिमार्जन गर्दै कुमालेले विभिन्न आकृतिका भाँडाकुँडा बनाएजस्तै बालबालिकालाई पनि विभिन्न ज्ञान र सीप सकाउन सकिन्छ ।त्यसैलै पनि उनीहरुलाई सानैदेखि राम्रा कुरा सिकाउन जरुरी छ । बच्चालाई राम्रो बानी सिकाउने जिम्मेवारी आमाबुबा र अभिभावकको हो । कतिपय कुराहरु बच्चा आफैले भोगेर सिक्छन् । कतिपय कुराहरु आमाबुवाले नै सिकाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय पढेर र धेरै […]
जानिराखौं, उखु खेती गर्दा हुने फाइदाहरू
उखु नगदे बाली वनस्पति श्रेणीको एक वस्तुको नाम हो । विश्वका ५०% कृषकहरूले उखु खेती अपनाएका छन् । उखु चिनि, मिश्री, सखर, आदी गुलियो पद्वार्थको कच्चा पदार्थ हो । उखुको रसलाई रासायनीक परिवर्तन गरेर उक्त वस्तुहरूको उत्पादन गरिन्छ । उखु खेतीबाट हुने फाईदाहरू उखु खेतीमा अरु खेती जस्तो धेरै चोटी जमीनको जोत खन गरि रहन […]
नेताहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने कारणहरु
राष्ट्रको रक्षा तथा नेतृत्व गर्न नेताको आवश्यक पर्दछ । राजनीति राज्यको नीति तथा अवधारणा भएकोले यसको सम्वन्ध सभ्यता, संस्कार र संस्कृतिसंग जोडिएको हुन्छ । राजनीति पेशा होइन, राजनीति विशुद्ध सामाजिक सेवा हो, यसलाई कदापी पनि कमाई खाने भाँडो बनाउनु हुन्न । राजनीति भनेको नैतिकताको व्यापक रूप तथा सम्भावनाको कला हो, यसको उपयोग मानव कल्याणमा हुनुपर्दछ […]
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुहरूले आफ्नो श्रीमती, प्रेमिका को हरेक दुख सुख, खुसीमा साथ दिने र रमाउने हुन्छन् ।उनीहरू श्रीमती, प्रेमिकाको प्रेममा पागल समेत बन्न सक्छन् । यस्ता राशि भएका पुरुषले जीवनमा आफ्रनो श्रीमतीको हरेक इच्छा,चाहाना पुरा गर्न सफल भएका हसन्छन् । आफ्नो श्रीमती लाइ धेरै माया गर्ने […]
यि राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग
फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा बुहारी बन्न सक्छन् । वृष राशी वृष राशि हुने युवतीहरु धेरैनै समझदार हुन्छन् । आफ्नो मात्र खुशी […]
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार १२ राशि हुने गर्दछन् । यी १२ राशि अनुसार व्यक्तिको स्वभाव, चरित्र पनि फरक हुने गर्दछ । राशि अनुसार भविष्य, स्वभाव, चरित्रलाई सजिलै नियाल्न सक्ने ज्योतिष शास्त्रले बताएको छ । यस्ता कतिपय राशि पनि छन् जसले अन्य व्यक्तिहरूलाई सजिलै आकर्षण गर्न सक्ने शक्ति दिएको हुन्छ । आज हामी तपाइहरूलाई ती राशिको बारेमा […]
हाम्रो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न चाड पर्वहरुको ठूलो महत्व हुन्छ । हाम्रा संस्कार र परम्पराहरुलाई यिनै चाड पर्वहरुले सुरक्षित राख्दछन् । त्यस्तैगरी चैते दशैं पनि एक विशेष नेपालीहरुको चार्ड हो पुराना कथनहरुका अनुसार पहिले पहिले मुख्य दशैं चैतमा पर्ने गर्दथ्यो तर उक्त समयमा सुख्खा भएर खडेरी पर्ने, माैसम बदली साथै दशैंको गरिष्ठ भोजन अनि हिँडडूलले धेरैजना […]
केपी शर्मा ओली नेपालको ४१ औं प्रधानमन्त्री हुन् । नेकपाका अध्यक्ष समेत हरेक ओली २०३० असोज २३ गतेदेखि जेल जीवन शुरुवात भएर २०४४ असार ११ मा भद्रगोल जेलबाट १४ वर्षमा रिहा भएका हुन् । सुन्दा अचम्म लाग्छ । विगतका दिनहरुमा १४ वर्षसम्म जेल जीवन विताएका ओली २ पटकसम्म प्रधानमन्त्री वनिसकेका छन् । विगतका दिनहरुमा त्यति […]
भनिन्छ बालबालिकामा अथाह प्रतिभा र क्षमता हुन्छ । बालबालिकामा भएको प्रतिभा र क्षमतालाई प्रस्फुटन गराउने कार्य एक सहजकर्ताको रुपमा विद्यालयले गर्न सक्नु पर्दछ । यही पवित्र विचारले अभिप्रेरित भई द वाइट माउन्टेन स्कुलको स्थापना गरिएको हो । २०६३ सालमा धौलागिरी नेशनल स्कुलको नामले धापासी-९, वसुन्धरामा स्थापना भएको हो । २०६८ साल चैत ९ गतेवाट विद्यालय […]
नेपालको राजधानी भनेर काठमाडौंमा लाखौं मानिसहरु बसोबास गर्छन् । सुन्दा जति राम्रो र ठुलो शहर काठमाडौंमा लाखौंको मानिसहरु भविष्यको सपना बोकेर पढ्न आउने गर्छन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रसभाको अध्यक्ष जस्ता सम्माननीय व्यक्तित्वहरुदेखि लिएर सडकमा सुत्ने, मजदुरहरु पनि यहाँ नै बस्छन् । विदेशी कुटनीतिक निकायका प्रमुखहरुदेखि बिदेशी प्रर्यटकहरु पहिला यहाँ नै आउछन् । […]
‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको सन्धिबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो जुन शब्दले ‘आचार नभएको’ वा ‘खस्किएको कारोवार’ लाई जनाउँदछ । सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्ध आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । खराब आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको प्रयास, सोच, व्यवहार अनि गर्नुपर्ने काम नगरेपनि ती […]
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाबाट पानी दशैँ भन्दा अगाडी नै काठमाडौं आइपुग्ने भनेतापनि दशैँ सकिएको दुई महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म आएको छैन । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले दशैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौंको बासिन्दाले पिउन पाउनेछन् भन्दै भाषण गरेकी थिईन । तर अहिले यो विषय विवादमा फस्दै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी योजना आयोगको इटालीयन निर्माण कम्पनी […]